KMN:- IBSA Adda Bilisummaa Oromoo irraa kenname, Guraandhala 29, 2020 – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooKMN:- IBSA Adda Bilisummaa Oromoo irraa kenname, Guraandhala 29, 2020
Qabsoo ijibbaataa gaggeessuudhaan uummata keenya kabachiifna!
Qabsoo Oromoo maseensuuf aggaammii godhamu mara irra aanuuf, duula qabsoo Oromoo goksuuf tattaaffii mootummaa abbaa irree taasisaa jiruun qabsoo Coollagsuuf yaalan kanatti humna horree dagaagsuuf dirqama Oromummaa qabna. Kana hubachuun ammas taanaan gama keenyaan gama Qeerroo Bilisummaa Oromoon humnoota qabsoo Oromoo gufachiisuuf barbadeessuuf dalagan hundeen dhabamsiifnee aarsaa qabsoo keenyaaf kaffalaamaa tureef gumaata Bilisummaa saba keenyaaf arjoomuuf qabsoo itti fufsiifnee jirra.
Hogganni dhaaba keenya ABO qabsoo karaa nagaatti amanee erga biyya isaa Oromiyaa galee as, daandii fi imala qabsoo karaa nagaa shaffisiisuun biyyattii gara nagaaf boqonnaa haaraatti imalchiisuuf gahee irraa eegamu bahataa osoo jiruu; qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf haldureewwan irraa eegamu xumurataa osoo jiruu, akeekni hogganoota ABO hidhanii kaan adamsuu irratti fuulleffachuun sochii qabsoo karaa nagaa danquu hadiida abbaa irrummaa gabbisuuf sochii adeemamaa jiru ta’uu kan hubanne kanatti daangaa tolchuuf qabsoo ijjibbaataa gaggeessuuf duubatti kan hinjenne ta’uu beeksifna.
Biyyattii gara jeequmsaaf hokkora hinmalletti ofuudhaan, shira mootummaan xaxaa jiru dura dhaabbatee uummati qabsoo isaa tikfachuudhaan bilisummaaf mirga abbaa biyyummaa isaaf akka falmatu gaafanna. Nageenya biyyattii tiksuuf dirqama olaanaa kan qabu mootummaan, dirqama isaa bahachuu dhabuurraa gara ofiifuu biyyattii jeequutti fuulleffannoon dalagaa waan jiruuf uummati keenya tokkummaa waggootaaf qabaataa ture sana tikfatee qabsoo isaa fi hoggana qabsoo isaa eeggachuudhaaf dirqama irraa eegamu bahachuu akka qabu dhaamna. Dhaabni keenya ABO’n dhaaba uummata Oromoo fi abdiif gaachana isaas uummaticha taasifachuun guutummaan guutuutti dhaaba uummata isaa Oromoo abdatu waan ta’eef aggaammii ABO irratti adeemaa jiru qolachuuf Oromoof dhaabbileen Oromoo dirqama isaa akka bahatu gaafanna.
Hoggantoota fi gorsitoota harra mana isaanii sakkata’an Buufata Poolisii Finfinne Sadaffaatti hidhaman kanneen:
Dr Shigux Galata, Gorsaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo
Jaal Abdii Raggaasaa, Miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo
Jaal Mikaa’el Booranaa, Miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo
Jaal Gamteessa Boruu, Gorsaa dinagdee Adda Bilisummaa Oromoo
Jaal Kennasaa Ayyanaa, Miseensa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo
Konkolaachiftoota fi Wardiyoota hoggaanoota kanneenii
Abdul Karim Abdulrahman
jedhaman halkan edaa Gurraandhala 29,2020 waraanni mootummaa mana isaaniitti marsuudhaan yaalii ajjeechaa irratti gaggeessuun guyyaa har’aa seeraan ala mana hiraarsaatti darbataman. Gurraandhala 24,2020 ammoo Hoganoota, Miseensota, Qondaalotaa ABO Baalee fi Arsii keessa sosso’an qaamni mootummaa qabanii hidhan. Guyyaa kana jechuun Gurraandhala 24,2020 kan qabaman:
Jaal Hundee Daraaraa Miseensa Gumii Sabaa ABO fi Gaafatamaa ABO Godina Baalee
Jaal Abdii Sabakoo Shanan Gadaa/Yilmaa Bariisoo gaafatamaa Damee Siyaasaa Godina Arsii Lixaa,
Jaal Injifannoo Muhaammad gaafatamaa jaarmaa godina Arsii Lixaa,
Jaal Gammadoo Leencoo/Ayyuub
gaafatamaa siyaasaa ABO Ona Nageellee Arsii qabanii hidhan. Baalee dhuma keessaa miseensa olaanaa ABO jaal Abdii (Qararam) Mohaammad dabalatee namootii hedduun qaama mootummaan dhiyeenya adamsamanii hidhamanii jiru. Kun waan dhiyeenyaaf jabinaan namoota qabsoo karaa nagaa ABO gaggeessaa jiran yoo ta’u, ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa’aman mana hiraarsaatti darbatamanii jiran.
Gochaa ajjeechaa fi hidhaa bifa addaan nu Oromoo irratti raawwataa jiru, aggaammii hoggana qabsoo keenya dhabamsiisuuf diinni Oromoo itti jiru dura dhaabbachuuf Oromoon marti dirqama qabaachuu isaa cimsinee hubachiifna. Qabsoon Oromoo har’a utuu hintaane kaleessumaa qabee hoggana isaa hoggana ABO utuu hinqusatin itti dhabaa kan as gahe; haalli amma adeemaa jiru ciminaan qabsoo keenya tikfachuuf gahee keenya akka baahannu kan nu taasisu ta’uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bal’aa hubachiisa.
Falli ajjeechaa fi hidhaa Oromoo irraa dhaabu inni murtaa’aan warraaqsa ta’uu kan amannu, daandii nagaaf naamusa seera biyyattii eeggateen uummata keenya dhabama irraa oolchuuf qabsoo keenya jabeessinee gochuu akka qabnu uummata Oromoof himna. Furtuun nageenya Oromoo harka saba keenya Oromoo kan jiru, Tokkummaa isaa jabeeffatee uummati Oromoo; ajjeechaaf hidhaa irratti adeemaa jiru bakka maraa bahee akka balaaleffachuu qabu dhaamna.
Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo lubbuu tokkittii qabnu qosannaa malee saba keenyaaf laachuun Qabsoo ijibbaataa gaggeessuudhaan uummata keenya kabachiifna! Uummatni keenya Oromoonis qabsoo fi qabsaa’ota isaa tiksuuf nu cina hiriiree gahee isa irraa eegamu akka bahaatu guutuu saba Oromoo maraaf dhaamna.
Abbaa Muudaa Madda Walaabuu says:
Ormi tuqee nama ilaala, abbaa tu roorroo of irraa qola, jedhama mitii ree. Iyya osoo hin taane kan malu labsa. Horaa, bulaa, hoffolaa !!
Iyya osoo hin taane labsatu mala. Gorsa qaalluu yoo qaabattan milkiin galtu.